Kubvunzana naCarlos Dosel, munyori weSombras en el faro | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waCarlos Dosel pane yake Facebook nhoroondo.
Carlos Canopy (Cartagena, 1970) ane, kwechinguvana, pfupi asi anovimbisa basa rekunyora semunyori we El nhaka yezvakaipa y Mumvuri mune yechiedza. Yekutanga, yakaburitswa muna 2015, ikozvino yave yayo yechitatu edition, uye yechipiri, muna 2018, yakabatanidza iyo muongorori Javier Manzano Mune basa re protagonista kubva pane dzino zvakateedzana zve nhema nhema pane izvo munyori ari kugadzirira a zita rechitatu.
Ndakaverenga Mumvuri mune yechiedza yakagara muGalicia, uye nemazuva ano Ndakave nemukana wekusangana naye nema network nekuda kwekufarira kwenyaya yekuparwa kwemhosva. Nomutsa ndipei izvi indavhiyu kwaanotiudza zvishoma nezve zvese. Iwe ndinotenda yakawanda yako nguva uye kuzvipira.
Carlos Dosel: Ndinozvirangarira chaizvo. Ndakakwereta kubva kuraibhurari yechikoro. Raive bhuku iro aitaura nezve santa claus. Ini handinyatso rangarira zita racho, asi ndinorangarira kuti rakandipa manzwiro emanzwiro nezvinhu izvo zvakaitwa nemunhu ane ndebvu chena.
CD: Yaiva bhuku iro shamwari yakandisiira. Yaive iyo ye Sphere, ivo Michael Crichton. Ipapo ini ndaifarira iyo ngano yesainzi kusvikira ndasangana naVaConan Doyle.
CD: Pamusoro pe Conan doyle Ndinogona kukutumidza Ruiz Zafon, Julia Navarro, Dan Brown, Vázquez Montalbán, yekukupa iwe mimwe mienzaniso yevanyori vakura vakandikurudzira.
DC: A Sherlock Holmes, pasina kupokana.
CD: Ndinoda kunyora ne poindi yakanaka yechiedza jekesa keyboard yangu uye mukombe wakanaka we kofi chete, kunyangwe ndisingafanire kana kunhuwidza.
CD: Ndinoda usiku. Kunyarara kwehusiku uye, kana zvichibvira, yakanaka mutikitivha movie soundtrack kana chakavanzika, kumashure. Panzvimbo, hofisi yangu, in tafura yangu uko ini ndine zvese zvandinoda kunyora.
CD: Ndinoreurura kuti rondedzero ye Ruiz Zafon Izvo zvakandikurudzira zvakanyanya. Kunyangwe yangu rondedzero iri yepakutanga, ndinofanira kutaura kuti ndinonyatsoda tsananguro dzaZafon uye kundibata kwaakaita pandiri.
CD: Mubvunzo uyu uri nyore: nhema uye zvinotyisa.
CD: Ndiri kupedzisa kuverenga Preston neMwana, naDetective Vincent D'agosta, yakanzi Iyo Blue Labyrinth, inowanzoitwa mutikitivha wekuAmerica.
Iye zvino ndave kuzviwana ndiri kuronga bhuku rangu rechitatu, zvakare nemuongorori Apple muti, mune imwe nyaya nyowani uko iyo CNI, one Mason Lodge uye a flashback Chakavanzika chakavakirwa pahupenyu hwevakaroora panguva yehondo yevagari vemo.
CD: Zvakanaka, regai tione, ndagara ndichitaura izvozvo pakupedzisira avo vanokodzera vanouya. Uye handisi kuti ndinokodzera kuti zvive kure nazvo, asi izvo chete, kana uchinyatsoda kunyora, iwe unosvika pachinangwa uye iwe uchagara. Kana zvisina kudaro, saka iwe uchagara munzira sezvo zvichizoitika kune vamwe. Ichi ndicho chimwe mujaho-kure-kure uko iye chete ane huni nemweya wemunyori anogona kukwikwidza uye kubudirira.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo yakakuomera here kana iwe uchawana chimwe chinhu chakanaka kubva mairi chenyaya dzeramangwana?
CD: Ndinotora mukana uno ku nyora zvambotaurwa uye, mukuwedzera, vamwe Nhoroondo dzeumwe Juani unofanirwa kurarama a nyika ine njodzi inogadzirwa ne utachiwana yakaipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naCarlos Dosel, munyori weSombras en el faro
Classics uye mamwe mabhuku epachirwere